Zaza Malagasy: kilalao avy any Amerika nozarain’i Olga Ramaroson
AccueilA la uneLatest Newsflash Madagate video et affiche EditorialEntreprendre Communiqué Interview En bref Technologies Communauté Malagasy PolitiqueDossier Analyse Monde malgacheArticles Portrait Reportagesphotos Manifestation Environnement Publi reporatge Annuaire Contact Home Accueil A la une Madagate video et affiche Zaza Malagasy: kilalao avy any Amerika nozarain’i Olga Ramaroson
Zaza Malagasy: kilalao avy any Amerika nozarain’i Olga Ramaroson	Samedi, 18 Août 2012 01:52	Madagate affiche	Raha misy manome zavatra ho anao, kingà miteny hoe : »Misaotra tompoko o »
Akoho misotro rano , na be na kely ao, avy angé tazano diniho sy jereo
Fisaorana no ataony, ny avo no andradraina, ry ankizy mba misaina ambaka ve ianao ?
Saika io avokoa no ambetin’ny teny nentin’ireo ankizy rehetra, nandalovan’ny Minisitry ny Mponina sy Raharaha sosialy, Olga Ramaroson, nandritra ny fitetezana ny faritra, nentina nizarana kilalao ho azy ireo, tamin’iny herinandro lasa iny.
Nosantarany ny fizarana izany tany amin’ny faritra DIANA izay nahitana ankizy miisa 250; nitohy tao SOFIA (ankizy miisa 250) ary nizotra tao Mahajanga tampon-tanàna nahitana ankizy 400, dia nitohy tao Marovoay (200) sy tao Ambato Boeny (200).
Navoitran’i Ramatoa Minisitra hatrany ny tokony anana’ireo ankizy fahendrena manaraka ny tenin’ny Raiamandreny, ary indrindra ny tsy hanadinoana ny fivavahana. Ilaina, hoy indrindra ny tenany ny ankizy tia firaisankina, tia namana, toy izay nataon’ireo ankizy any Amerika izay nanome ireto kilalao ireto. Ireto kilalao ireto tokoa mantsy, raha tsahivina, dia fanomezana avy amin’ireo zaza any Amerika izay eo amin’ny 5 taona ka hatramin’ny 14 taona. Ny vola tokony atao “ goûter” no nangonin’izy ireo ka nividianany kilalao, ankanjo, kiraro, fitaovana fidiovana sy ny maro samihafa. Avy eo dia nataon’izy ireo anaty boatin-kirarao izay nangonina tamina toerana iray tao amina fiangonana miisa 37 tany Amerika.
Avy eo dia natao tao anatine kaontenera ireo boaty misy kilalao ireo ary nalefa aty Madagasikara, amin’ny alàlan’ny Ong TAK na ny Tetik’asa Ankizy Krismasy, izay Andriamatoa Randriamalala Alain no Filoha nasionaly. Ity Ong farany ity indray no miara-miasa amin’ny Minisiteran’ny Mponina ka manatontosa ny fomba famoahana ireo kilalao, ary mizara izany ho an’ireo ankizy sahirana manerana ny nosy. Raha amin’ity taona 2012 ity dia nahatratra 37 ny isan’ny kaontenera tonga izay ahitana kilalao miisa 7000 isaky ny kaontenera. Izany hoe: afaka hahazo izany kilalao izany avokoa ny ankizy amin’ny faritra 22 eto Madagasikara.
Na dia eo aza anefa ny famporisihana ny ankizy ho hendry, dia tsy adino ny nanentana ny raiaman-dreny mba hampianatra ny zanany, eny na dia ny falalam-pomba fotsiny ihany aza.
Tamin’ireo toerana nolalovan’ny Minisitry ny Mponina nanaovana izao fizarana izao, dia tsikaritra teny amin’ny hendrik’ireo zaza ny aravoana, satria dia nitombona tao anatin’ny fialan-tsasatra ny fizarana ny kilalao , izay fotoana ahafahan’ireo zaza milalao izany kilalao izany.
Tsiahivina fa nanomboka ny zoma 20 Jolay 2012 lasa teo ny fizarana ireo kilalao avy any Amerika ireo ka tao amin’ny fiangonana katolika tao Namontana no natomboka.
Soratra sy Sary : Andry RAKOTONIRAINY – Zoma 17 Aogositra 2012
Mis à jour ( Samedi, 18 Août 2012 05:51 )